Vatsigiri veZanu-PF neMapurisa Vopomerwa Mhosva yeKuvhiringidza VaChamisa Kusangana neVatsigiri Vavo
Vatsigiri vebato reZanu-PF kwaChivi pamwe nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuyedza kurambidza mutungamiriri webato guru rinopikisa munyika reMDC-Alliance, VaNelson Chamisa kuita misangano mudunhu iri.
Vatsigiri veZanu-PF vanonzi neChipiri vakavhara migwagwa nematombo nematanda kuti VaChamisa vasadarike.
Vatsigiri ava vange vachiratidizira vakatakura zvinyorwa zvange zvichishora VaChamisa kuti ndivo vakapa kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika nevavanodyidzana navo zviiswe.
Kunyangwe hurumende iri kuti zvirango zvakatemrwa nyika nenyaya yekutora minda, nyika dzakatemera zvirango izvi dzakaita seAmerica nedziri mugungano reEU dzinoti zvakatemerwa vashoma vane maoko aneropa uye vari kuita zvehuori.
VaChamisa vambomiswa kwenguva yakareba nevatsigiri ava pamwe nemapurisa vachirambidzwa kupinda paChivi Growth Point pavange vane musangano pamwe nepazvitoro zvepa Mhandamabwe asi vazokwanisa kupinda apo vechidiki vemusangano wavo vauya nehuwandu vakabvisa matombo nematanda mumugwagwa.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC-Alliance VaGift Ostallos, avo vari kufamba naVaChamisa vati vashungurudzwa zvikuru nemapurisa pamwe nevatsigiri veZanu PF kawaChivi.
Nezuro vatsigiri veMDCA, vakawanda vakakuvara varohwa nekutemwa nematombo nevatsigiri ve Zanu PF kusanganisira vimbova Kanzura weward 5, VaDaniel Mberikunashe, avo vakamiswa basa nerimwe bandiko reMDCT, vati vari kurwadziwa zvikuru nemaronda avakaita nezuro pamhirizhonga iyi.
Vanoona nezvematongerwe enyika vakazvimirira muMasvingo, VaMasimba Gonese, vanoti kurambidzwa kuri kuita VaChamisa kupinda mumaruwa kunoratidza kuti vane mukurumbira zvovhundutsa bato reZanu-PF.
Gweta rakazvimiria muMasvingo, VaOmen Mafa, vanoti mutemo uri kushandiswa zvisina kuenzana sezvo mamwe mapato ari kubvumidzwa kuita misangano nemapurisa asi veMDC-A vachirambidzwa.
Mutauriri wemapurisa muMasvingo, Inspector Kudakwashe Dehwa, vati vange vasingakwanisi kutaura neStudio 7, sezvo vange vari paneruzha vakati tizofona asi vanga vasingasabatiki.
Studio 7, yatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF, vaTafadzwa Mugwadi, avo vange vasingadairi nhare kana tsamba kuti tinze divi ravo pamizhirizhonga dziri kuitika pamapato avo neMDC-A.
Asi mumwe wechidiki mubato reZanu PF, Muzvare Princess Ushendibaba, uyo ari kuratidzirawo achiti zvirango zvibviswe anoti havasi kuita mhirizhonga asi vari kuratidza kurwadziwa kavo nekutambura kuri kukonzerwa nawo.
Asi veMDC-Alliance vanoti kutambura munyika kuri kukonzerwa nehuori, kubiwa kwemari munyika uye kutadza kutungamirira kwakanaka kuri kuitwa nebato ririkutonga reZanu PF kwete zvirango.
VaChamisa vanoti vachiri mudunhu reMasvingo umo mavachashanyira maruwa akasiyana-siyana vachisangana nevatsigiri vavo vachinzwa pfungwa dzavo munyaya dzezve matongerwe enyika pamwe nemamiriro akaita hupenyu mumaruwa.
Nemusi weMuvhuro motokari dzaVaChamisa dzakatemwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF kwaCharumbira kuMasvingo.